Syvende - Norveççe - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: syvende (Norveççe - Birmanca)
ထိုကြောင့် လူများတို့သည် ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြ၏။
ဆဋ္ဌမသားဩဇင်၊ သတ္ထမသား ဧလိဟု၊ အဋ္ဌမသားဒါဝိဒ် တည်း။
likeså den annen og den tredje, like til den syvende.
ထိုသို့နှင့်အညီ ပရောဖက်ဟာနနိသည် ထိုနှစ် တွင်၊ သတ္တမလ၌ သေလေ၏။
elam, den femte, johanan, den sjette, eljoenai, den syvende.
သတ္တမတကြိမ် စာရေးတံပြု၍ ဒန်အမျိုးသားတို့ သည် အဆွေအမျိုးအလိုက် အမွေခံရကြ၏။
သတ္တမသူယေရှရေလ၊ သူနှင့်သူ၏သား ညီပေါင်းကား တကျိပ်နှစ်ယောက်တည်း။
ဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်၊ သတ္တမလ၌ လုပ်သော ပွဲအတွင်းတွင်၊ ရှင်ဘုရင်ထံတော်သို့ စုဝေး ရောက်လာကြ၏။
သတ္တမနေ့၌ နွားထီးခုနစ်ကောင်၊ သိုးထီးနှစ် ကောင်၊ အခါမလည် အပြစ်မပါသော သိုးသငယ်ဆယ် လေးကောင်ကို၎င်း၊
den syvende dag kom høvdingen for efra'ims barn, elisama, ammihuds sønn.
သတ္တမနေ့၌ ဧဖရိမ်အမျိုးတွင် မင်းဖြစ်သော အမိဟုဒ်သား ဧလိရှမာဆက်သော ပူဇော်သက္ကာဟူ မူကား၊
ရှင်ဘုရင် နန်းစံခုနစ်နှစ်၊ ပဥ္စမလတွင် ဧဇရ သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ရောက်လေ၏။
သင့်ကိုအမှုခြောက်ပါးထဲက နှုတ်ယူတော်မူ သည်သာမက၊ ခုနစ်ပါးသောအမှု၌လည်း ဘေးတစုံတခုမျှ မထိမခိုက်ရ။
သတ္တမတံဆိပ်ကိုဖွင့်သောအခါ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ နာရီဝက်မျှ တိတ်ဆိတ်စွာ နေကြ၏။
ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌၊ အချို့တို့သည် သိမ်းယူခြင်းငှာ ထွက်သွားရာတွင်၊ ရှာ၍ မတွေ့ရကြ။
မှာထားသည်ကား၊ ခုနစ်နှစ်စေ့၍ ကျွန်များကို လွှတ်ခြင်းငှာ ချိန်းချက်သောနှစ်၊ သကေနေပွဲခံချိန် ရောက်မှ၊
ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး တဆေးမပါသောမုန့်ကို စားပြီးမှ၊ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့တွင်၊ ထာဝရဘုရား အဘို့ ပွဲခံရကြမည်။
သတ္တမနေ့၌လည်း၊ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုရ မည်။ လောကီအလုပ်ကို မလုပ်ရ။
gazela (Arnavutça>İtalyanca)credit card refid (İngilizce>Danca)melebur (Malayca>Çince (Modern))nu vreau (Romence>İngilizce)clemens fahrig (İngilizce>Fransızca)ron (Lehçe>Fince)aaj payment ho jayegi (Hintçe>İngilizce)trombocitopeniilor (Romence>İngilizce)이번주말 (Korece>İngilizce)fine (İngilizce>İbranice)daun sawi (Malayca>Çince (Modern))bucurești (İspanyolca>İngilizce)siamo ad intimare il pagamento di quanto scaduto (İtalyanca>İngilizce)smakelijk (Hollandaca>Arapça)gewonde man met spoed naar het ziekenhuis (Hollandaca>Lehçe)tágítási (Macarca>İngilizce)afghan (İngilizce>İbranice)xhosa word for small (İngilizce>Xhosa)granule (Arapça>İngilizce)aceites hidráulicos sintéticos (İspanyolca>İngilizce)attachment (İngilizce>Slovence)waggelende (Hollandaca>İngilizce)increase due (İngilizce>Afrikanca)bala ng baril (Tagalogca>İngilizce)io non avevo dubbi che tu avessi capito (İtalyanca>İngilizce)